4 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း Bilecik တွင်ရထားမတော်တဆမှုအတွက်သတိပေးချက် RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး11 BilecikBilecik အတွက်မီးရထားမတော်တဆ4နှစ်အကြာဖျော်ဖြေသတိပေးချက်များတဖန်လစ်လျူရှုခဲ့ကြ
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 11 Bilecik, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်ပေါ်တွင်ရထားမတော်တဆမှု Bilecikte ဆဲ gelinmis ဖြင့်သတိပေးချက်များလျစ်လျူရှု
Bilecik (YHT) ရထားအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းနှစ်ခုယာဉ်မောင်းသူ၏အသက်တာကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူကို manual ထိန်းချုပ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်လွဲချော်ရပ်တန့်။ သို့သော်ထို့နောက်အနိုင်ရတူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ၏ဘူမိဗေဒအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (JMO) Bilecik ၏ရှိရာAhmetpınarရွာဒေသတွင်းထင်ရှားကြောင်းလေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသတိပေးခဲ့သည်။
Ismail Saris Birgün'ünနေအစီရင်ခံစာအရယင်းအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ထားရန်ဘူမိဗေဒအင်ဂျင်နီယာများ (CGE) xnumx't ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကတင်ဒါအနေဖြင့်အလုပ်လေ့လာမှုပျက်ကွက်ဖို့ကွင်းဆက်၏လူကြိုက်များပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် TCDD တစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုမတော်တဆမှု, "နှစ်ခုသီးခြား partition ကို၏တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းကြောင်းလွှဲပြောင်းပြောသည်; 2015 Karakoy Ahmetpınar Bilecik အကြား Pasha-Arifiye ကြားရှိအပိုင်းနှင့်အတူ Alifuat ရာအရပျအရေးကြီးသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအန္တရာယ်များပါရှိသည်ကီလိုမီတာ။ high-speed ကိုမီးရထားမြန်နှုန်းကို၎င်း, 8 km / h အနီးကဒီလိုင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံထဲမှာလူသိများရပါမည်မလုံခြုံမြန်နှုန်းရထားလိုင်းများ၏အန္တရာယ်ကို run မနေပါနဲ့, "ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါAhmetpınar jmon Bilecik အပိုင်းများ၏စာမေးပွဲများ၏ရလဒ်များအောက်ပါကြေညာချက်တွင်ပါရှိသော: "ယခုအရည်အချင်းများလိုအပ်စီမံကိန်းဇာတ်စင်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဘူမိလေ့လာမှုများမှာအမှုကိုပြုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင့်သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှု 29 မတ်လ 2011 ရက်စွဲနှင့် 27889 လိုအပ်သောလေ့လာမှုများ၏ဆောက်လုပ်ရေးစဉ်အတွင်းအဆင့်မှာဖျော်ဖြေကြသည်မဟုတ်သောလမ်းကြောင်းအပေါ်လိုင်းအတွက်စာမေးပွဲ စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ၏တရားရုံးထံမှနားလည်သဘောပေါက်ထားရန်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတရားဝင်ပြန်တမ်းထိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးနှင့်အများပြည်သူအရင်းအမြစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ဝေရေတွက်ဝန်ကြီးများလျော့ခံရဖို့စေ၏။ "
"ဒေသများတွင်ထိုကဲ့သို့လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လမ်းကြောင်းတလျှောက်တွင်တည်ရှိသောနှင့်အပြတ်အသတ်တက်ကြွစွာအမှားဇုန်အဖြစ်မကြာမီမြောက်ကိုရီးယား Anatolian ပြတ်ရွေ့၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ rant မျှော်လင့်ချက်များစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလိုင်းအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုဖွင့်လှစ် tcdd`n: အဆိုပါအစီရင်ခံစာကိုလည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏အဖွင့်ဖို့အလုအယက်အဲဒီမှာဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုမှတ်ချက်ပြု လမ်းကြောင်းရှိအခြားအခြေခံအဆောက်အဦများပါဝင်သောတင်ဒါအတွက်လွန်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဆင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဘူမိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်သောစောင့်ရှောက်မှုပြသသောမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုကြပါပြီအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ "
အခန်းပေါင်း, TCDD ကိုလည်းအောက်ပါမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုဖို့တောင်း: မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုBozüyük-Bilecik ဧရိယာသို့အပိုင်းများနှင့် Karakoy - ထိုမြေပြိုမှုများအတွက်နေရာယူကြောင်းဖြတ်တောက်မှု၏ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဘူမိစစ်တမ်းများနူးညံ့သောအရာကိုနေ့စွဲအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်Ahmetpınar? ကုမ္ပဏီတစ်ခုကယူထားပါတယ်သောဤတင်ဒါ?
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူ၏အသက်တာ Recep Tunaboylu နှင့် Sadat မျိုးချစ်အသုဘဆုတောင်းပဌနာကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူအင်ဂျင်နီယာပြီးနောက်သူမနေ့ကသင်္ဂြိုဟ်လေ၏။
ယခုနှစ်အဘို့ပြင်ဆင်သောဘူမိဗေဒအင်ဂျင်နီယာများ 's ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအစီရင်ခံစာ 2015 ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Kardemir: "လူတွေကပထမဦးစွာပတ်ဝန်းကျင်ပထမဦးစွာ" 18 / 12 / 2017 Kardemir ဘုတ်အဖွဲ့: ရာထူးကျနော်တို့ Kardemir အပေါငျးတို့သအလားအလာသတင်းရပ်ကွက်တခုတခုအပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစပျိုးစေခြင်းငှါ Kardemir ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုတိုးလာမှုနှုန်းနှင့်အတူအပြင်ဘက်ပေါ်မှာငါတို့ SO2 သို့မဟုတ်အသုံးချကစားလုပ်ရပ်ပေး ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အောက်ပါရှိပါတယ်များ၏ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. လုပ်စာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ချက်များ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, လယ်ပြင်သည်လက်ရှိတွင် 5.400 န်ထမ်း်ထမ်းဆောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ဖြစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် 10 4.2 အတွက်ဘီလျံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငါတို့တိုင်းပြည်အစေခံရန်ဆက်လက် TL တစ်နှစ် လုပ်. တန်ဖိုးကိုဖန်တီးပါ။ သံမဏိထုတ်လုပ်မှု 40 လူပေါင်း (ကမ္ဘာ့ဖလားသံမဏိစာရင်းအင်းများ) ၏အသီးအသီးတစ်တန်ကိုမုန့်နှင့်ဖုံးဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည် 96 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အကြောင်းကိုတထောလူများ၏စားဝတ်နေရေးကိုမြင်ကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ ...
သို့သျောလညျးကိုထပ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး Izmir 24 / 02 / 2015 တနည်းကား, Izmir နောက်ထပ်ပထမဦးဆုံး: တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတီထွင်ဆန်းသစ်မှုညွှန်ကြားမှု Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ဒေသခံအစိုးရများကဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့နေထိုင်သူထိနှင့်ဆန်းသစ်သောစီမံကိန်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း created သိပ္ပံရေးရာ၏ညွှန်ကြားမှုရေရှည်တည်တံ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင်İzmir၏အနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ပွင့်လင်းပါလိမ့်မည်ပေးပါလိမ့်မယ်။ "တီထွင်ဆန်းသစ်မှု" အယူအဆဒေသခံအစိုးရအတွင်းမှာကျနော်တို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက်အများကြီးပိုပြီးနားထောငျခနေသားတကျဖြစ်ကြသည် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ခေတ်၏ဆန်းသစ်သောအလုပ်အတူတက်ထားရန်သစ်တစ်ခုတဦးတည်းပေါင်းထည့်ခြင်းအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်ညွှန်ကြားမှု, သိပ္ပံရေးရာဦးစီးဌာနအတွင်းထူထောင်နောက်လိုက်ဖို့နီးကပ်စွာကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုယက်နှင့်အတွေးအခေါ်များကိုထုတ်လုပ်ဖို့ Izmirliyan ဆန်းသစ်စီမံကိန်းများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ အသစ်နည်းပညာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစူးစမ်းခြင်း ...
Antalya ဓါတ်ရထားလမ်း Unutulun တစ်ဦးချွတ် Unbuild ၏လမ်းဆုံဖျော်ဖြေနှစ်လလွန်ခဲ့တဲ့ထင် 17 / 02 / 2016 လွန်ခဲ့သောနှစ်လနေဖြင့် Antalya ဓါတ်ရထားလမ်း Unutulun တစ်မြှောင်များ၏လမ်းဆုံပြုသောအမှု Antalya အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရခြင်းနှင့်တံတားလမ်းဆုံ 2016 လမ်းသွားလမ်းဝင်ဝ၏ချွတ် months ago2အားဖြင့် unutulun န်ဆောင်မှုများဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်လမ်းကိုအစေခံရန် entry ကို၏လမ်းရထားဇာတိမှာ Aksu ခရိုင်အတွင်းရှိဧပြီလ Expo xnumx'y အကူးအပြောင်းအတွက်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ် ။ Antalya ကုန်စည်ပြပွဲ xnumx'y အကူးအပြောင်းလမ်းမှဖယ်ရှားခဲ့သည်တံတားလမ်းဆုံလမ်းသွားတစ်ဦးချွတ်သို့32016 ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့် unutulun months ago အစေခံရန်အလမ်းရထားဝင်ပေါက်လမ်း၏ဇာတိမှာ Aksu ခရိုင်အတွင်းရှိဧပြီလစတင်ပါလိမ့်မယ်။2အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကစီမံကိန်းများကိုအပေါ်တူရကီရဲ့စျေးအကြီးဆုံးအမှားမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏ Antalya ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ASCE) အဖြစ်ငျြးပွညျ့မီကြောင်းရှည်လျားသော "ဟာသ" ကီလိုမီတာ ...
အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာ Bilecik အတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်အခမ်းအနားများတွင်သေဆုံးရထားမတော်တဆကြုံတွေ့ 20 / 09 / 2019 Bilecik အတွက်မီးရထားမတော်တဆဝမ်းနည်းဖွယ်အခမ်းအနားမှအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားစက်လုပ်သမားကွယ်လွန်။ သူတို့ထိန်းချုပ်မှုရထားလမျးညှနျရာမှ Bilecik အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကို Recep Tunaboylu (37) နှင့်မျိုးချစ် Sadat (39) အသုဘဆုတောင်းပဌနာပြီးနောက်သင်္ဂြိုဟ်လေ၏သေဆုံးသွားသူကိုစက်လုပ်သမားရိုက်ယူခြင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမြို့ရိုးကိုနှိပ်ပြီးနောက်လွဲချော်ရပ်တန့်။ စက်လုပ်သမားReçber၏ Recep Tunaboylu အသုဘYeşitepရပ်ကွက်အတွင်း Reza ဗလီများတွင်စိုက်ပျိုးရေးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ယင်း AK ပါတီလက်ထောက် Eskisehir Harun Karacan ၏အသုဘပဌနာ, CHP Eskişehirလက်ထောက်Çakıröz Utku, Tepebaşıမြို့တော်ဝန် Ahmet Atac နှင့် Tunaboylu ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အသုဘပဌသင်္ချိုင်း Recep Tunaboylu ရာစုမြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏ဆုတောင်းပဌနာပြီးနောက်နေစဉ်။ တစ်ဦးအသွားအလာမတော်တဆမှုသေဆုံးတဲ့သူကတခြားစက်လုပ်သမား ...
Izmir '' ပထမဦးဆုံးခြေမ '' သတိပေးချက်ထဲမှာ 170 အမှတ် 25 / 07 / 2019 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး marking ကြမ်းပြင်အောက်တွင်စတင်ခဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေးရာ '' ထုတ်လွှတ်မှု၏ဘဝဦးစားပေးဦးစားပေး '' ။ အဆိုပါ 170 ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များအတွက်, ကျောင်းများနှင့်လူကူးဖြတ် '' ပထမဦးဆုံးခြေမ '' image ကိုအသုံးချခံရဖို့စတင်လုပ်ပြီး Izmir ၏ခရိုင်အပေါငျးတို့သစင်တာများပျံ့နှံ့လိမ့်မယ်။ 2019 နှစ်ပေါင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထဲရေး၏ '' လမ်းသွားလမ်းလာဦးစားပေးယာဉ်အသွားအလာများ Year '' ကြေညာခဲ့သည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်, 'ဘဝရဲ့ဦးစားပေး, ဦးစားပေးထုတ်လွှတ်မှု၏' Izmir အတွက်တစ်လျှောက်လုံးကင်ပိန်းအဘို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 170 အမှတ် marking ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကြွေးကြော်သံနှင့်အတူဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ traffic လူသွားလူဦးစားပေးအာရုံစိုက်ရေးဆွဲရန်ပြင်ဆင် '' ပထမဦးဆုံးခြေမ '' လူကူးများ၏ရှေ့မှောက်၌ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီးကျောင်းကဖြတ်မောင်းသူများ၏ရုပ်ပုံများကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကြမ်းပြင်ဆိုင်းဘုတ်များနှေးကွေးစေရန်နှင့်လမ်းသွားလမ်းလာရပ်နေသဖြင့်နှိုးဆွပေးရာအရပျ / အကူးအပြောင်း၏ယာဉ်မောင်း ...
Antalya ဓါတ်ရထားလမ်း Unutulun တစ်ဦးချွတ် Unbuild ၏လမ်းဆုံဖျော်ဖြေနှစ်လလွန်ခဲ့တဲ့ထင်
Adana Metro လျစ်လျူရှုအဆိုပါ AKP အစိုးရ
သုံးရက်အကြာသူတို့စွန့်ပစ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကို၏ Transformer အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုခိုး
အဆိုပါ Kars-Arpaçay 10 ရက်ပေါင်းအကြားလွန်ခဲ့သည့်စွန့်ပစ်ကတ္တရာလမ်းကျိုးပျက်ခဲ့သည်